मान्छेको मन न हो, कतिबेला कुन कुराले दुख्छ के ठेगान – Kadar News : Oneline Digital News:
मान्छेको मन न हो, कतिबेला कुन कुराले दुख्छ के ठेगान
प्रकासित : ३१ असार २०७७, बुधबार १०:३०
३१ असार, काठमाडौं । पूर्वमाओवादी केन्द्र हुँदै हाल नेकपा स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझी पटकपटक मन्त्री र एकपटक उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध उत्कर्षमा पुगेको बखत खासै चर्चामा नआएका उनलाई दुबै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । एकथरि यतिखेर रायमाझी चालिस बर्षको संगत छाडेका लेखराज भट्टजस्तै प्रचण्डसँग असन्तुष्ट रहेको र अर्काथरिले उनी केपी ओलीसँग लपक्कै भएकाले अहिलेको बिबादमा खुल्न नचाहेको बताउँछन् ।
उता हरिबोलचाहिँ प्रचण्डलाई आनीबानी सुधार,परिवार नच्याप,जो पायो उहिसँग नभेट, जिल्लातिरका कार्यकर्तासङ्ग आफै सम्पर्कमा बस भनी सल्लाह दिइरहन्छन् ! पोहोर माघमा भारतीय चलचित्र अवार्ड आइफा बितरण कार्यक्रम गर्न लागिएको बेला बालुवाटारमा भेट्न जाँदा भात खान ढिला भयो भनेर तर्काएकोरफर्काएको रिसले गजुरेल एक बर्षसम्म ओलीको सम्पर्कमै गएनन् ! यी पनि पार्टी फुट्ने भयो भन्ने लागेपछि अहिले जसरी पनि मिलाउनुपर्छ भन्ने तहमा पुगेका